Manaiky ny fahazavana alefan’Andriamanitra
"Ampandehano ny fahazavanao sy ny fahamarinanao; aoka hitarika ahy ireo ka hitondra ahy ho any an-tendrombohitrao masina, dia ho any amin'ny tabernakelinao." — Sal. 43:1
Feno famindrampo sy fiainana ary fahazavana i Jesôsy Tompo raha tetý amintsika, ary vonona ny hamonjy izay rehetra manatona Azy. Tsy afaka hamonjy izay tsy maniry izany famonjena izany anefa Izy. Tsy manery ny fieritreretan'ny olona Andriamanitra; tsy fombany velively ny mampangirifiry ny vatana mba hanerena ny olona hanaraka ny lalàny. Baiko avy amin'i Satana avokoa ny asa rehetra toy izany (...)
Efa nahariharin'ny Tompo fa ataony eo anoloan'ny mpanota ny tombontsoa hiara-miasa amin'Andriamanitra. Manolotra fahazavana Izy miaraka amin'ny porofon'ny fahamarinana. Efa nataony mazava tsara ny fitakiany ka anjaran'ny mpanota ny manaiky ny fahamarinana ary handray ny fahasoavana sy ny hery hahazoany manaraka ny fepetra rehetra. Hahita fitsaharana izy amin'izany noho ny fanompoany an-tsitrapo an'i Jesôsy Kristy, izay efa nandoa ny onitry ny fanavotana. Raha misalasala ilay mpanota ka tsy mankasitraka ny fahazavana efa nahatratra ny sainy sy nanetsika ny fihetseham-pon'ny fanahiny, ary mandà ny hankatò an'Andriamanitra, dia hihena izany fahazavana izany, hihakely ny heriny ary farany dia hanjavona tsy ho hitan'ny masony intsony. Izay tsy mankasitraka ny tara-pahazavana voalohany, dia tsy hiraika amin'ireo porofon'ny fahamarinana mbola mazava kokoa aza. Raha tsy mahazo valin-teny avy ao am-pon'ny mpanota ny antsom-pitiavan'Andriarnanitra, dia tsy hanan-kery aminy ireo fanairana voalohany natao tao an-tsainy, ary ho tavela ao amin'ny haizina izy amin'ny farany. Feno fitiavana ilay antso. Ilay fahazavana dia vao mainka mamirapiratra amin'ny fotoana andavany azy, mihoatra noho ny tamin'ny fotoana nahatongavan'izany teo amin'ny fanahiny. Amin'ny fandavany izany fahazavana izany kosa anefa no hampanjary feno haizina ny fanahin'ilay mpanota ka tsy tsapany akory ny zava-doza vokatry ny fandavana ny fahazavana. Izao no lazain'i Kristy amin'ny fanahy toy izany: "Mbola kely ihany no hitoeran'ny mazava aminareo." — YI, 17 Aogositra 1893.
Ataovy azo antoka tsara ny antsonao sy ny safidinao androany. Manome ny dika mitovy amin'ny fanekem-piantohan'aina tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao i Petera. Hoy izy: "Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana (...) Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra." — YI, 07 Desambra 1893.